Globe Soccer Award ၏ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို စီရော်နယ်ဒို ငါးကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူး - Yangon Media Group
ဂျူဗင်တပ်တိုက်စစ်မှူး စီရော်နယ်ဒိုသည် ဥရောပကစားသမားအေဂျင့်အဖွဲ့ချုပ် (EFAA) နှင့် ဥရောပကလပ်အဖွဲ့ချုပ် (ECA) တို့မှ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သည့် Globe Soccer Award ဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဆုကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် စတင်ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်တွင် စီရော်နယ်ဒိုက ငါးကြိမ်မြောက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Globe Soccer Award ဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်း၌ ပြင်သစ်ကစားသမားများဖြစ်ကြသော အမ်ဘာပီနှင့် ဂရေ့ဇ်မန်းတို့ ပါဝင်ခဲ့ကြသော်လည်း စီရော်နယ်ဒိုက ဖြတ်ကျော်ရရှိခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် Globe Soccer Award ဆုပေးပွဲတွင် အကောင်းဆုံး နည်းပြဆုကို ပြင်သစ်အသင်းအား ၂ဝ၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့သည့် နည်းပြ ဒက်ချမ့်စ်ကရရှိကာ၊ ဘရာဇီး ဂန္ထဝင်ကစားသမားကြီး ရော်နယ်ဒိုက အကောင်းဆုံး ကစားသမားဘဝဆုကို ရရှိခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအသင်းဆုကိုမူ ယူရိုပါလိဂ်နှင့် ဥရောပစူပါဖလား ချန်ပီယံ အက်သလက်တီကိုအသင်းက ရရှိခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးကစားသမားဆု ရရှိပြီးနောက် စီရော်နယ်ဒိုက ”ဒီဆုဟာ ၂ဝ၁၉ နှစ်သစ်ကို အကောင်းဆုံး စတင်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန် တော့်ကို တန်ဖိုးထားပြီး ဒီဆုကိုပေးအပ်တဲ့အတွက် အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိပ်တန်း ၆ သင်းကို ဂိုးအများဆုံး သွင်းထားသူအဖြစ် အဂူရို ဆက်လက် ဦးဆောင်
ပူလီဆစ် ရောက်ရှိလာခြင်းကို ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူ ကန်တီ ကြိုဆို
နိုင်ငံတော်၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သ??
MPT နှင့် MCF တို့ ပူးပေါင်း၍ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ မွေးထုတ်?
နှစ်စဉ် ပြုလုပ်နေကျ Birthday Show ကို ယခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်၌ ပြုလုပ်မည့် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
နယူးဇီလန် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် လမ်းပြဝေလငါး ၁၄၅ ကောင် သောင်တင်သေဆုံး